Alteryx: Iyo Yekuongorora Maitiro Ekushandisa (APA) Platform | Martech Zone
Alteryx: Iyo Yekuongorora Maitiro Ekushandisa (APA) Platform
Chipiri, Gunyana 20, 2020 Chipiri, Gunyana 20, 2020 Douglas Karr
Kana kambani yangu ichibatsira nekutyaira dhijitari shanduko nzendo mumakambani emakambani, isu tinotarisa pane matatu akakosha nzvimbo - vanhu, maitiro, uye mapuratifomu. Isu tinobva tagadzira chiono uye nzira yemigwagwa yekubatsira iyo kambani kugadzirisa uye kuvaka kugona mukati pamwe nekushandura ruzivo rwevatengi kunze.
Kubatana kwakaoma kunogona kutora mwedzi, kusanganisa misangano yakawanda nehutungamiriri uye kuongororwa kwakadzama kwedata, mapuratifomu, uye kusanganisa kunoenderana nebhizinesi. Chikonzero chakakosha ndechekuti data rakatsetwa pakati penzvimbo nhatu.
Chii chinonzi Analytic Process Automation (ACA)?
Ongororo Maitiro Ekushandisa inoratidza kukura kwe data uye analytics software, iyo yaimbove nemisika yakasarudzika inosanganisira analytics, bhizinesi njere, data sainzi, uye maturusi ekushandisa maturusi. APA inoshandura matatu akakosha mbiru dze otomatiki uye yedhijitari shanduko kugonesa iyo democratization ye data uye analytics, iyo michina ye maitiro ebhizinesi, Uye kukwidziridzwa kwevanhu nokuti anokurumidza anokunda uye shanduko inoguma.
Ongororo Maitiro Ekushandisa (APA) ndiyo tekinoroji inobvumidza chero munhu musangano rako kuti agovane nyore nyore data, otomesa inonetesa uye yakaoma maitiro, uye shandura dhata kuti ive mhedzisiro. NeAnalytic Process Automation, chero munhu anogona kuvhura fungidziro uye inotsanangurwa maonero anotyaira anokurumidza anokunda uye nekukurumidza ROI.
Alteryx, Chii chinonzi APA?
Alteryx ipuratifomu yakabatana ye analytics, data sainzi, maitiro otomatiki, autoML, uye AI:
Zvoga Zvigadzirwa Zvemagetsi - 80+ natively integrated data zvinyorwa kubva kuAmazon kuenda kuOracle kuenda kuSalesforce. Chengetedza zvakachengeteka kune imwe nhamba isingagumi yezvimwe zvinyorwa. Kana iwe uchikwanisa kuwana iyo data, unogona kuiunza muAlteryx uye kushandisa yakawanda nguva kuongorora uye nenguva shoma yekutsvaga.
Dhata Yemhando uye Kugadzirira - Ongorora uye ubatanidze data kubva kune-epamberi dhatabhesi, iro gore, uye makuru kana madiki madhata seti nezvimwe. Chenesa zvirinyore, gadzirira, uye sanganisa data kubva kune akasiyana masosi akasiyana kana kana asina akasarudzika ekuzivisa kuendesa yakabatana data profiles.
Kuwedzeredza Dhata uye Kunzwisisa - Shandisa simba regore ne-in-database zvishandiso zvinoshandura dhata hombe kuita nzwisiso huru. Enda pamusoro pehuwandu hwehuwandu hwehuwandu hwevanhu nehunhu uye hwekutengesa ruzivo rwekugadzira yakadzika maonero uye unzwisise zvechokwadi vatengi. Simbisa kuongorora kwako nemamepu, mhinduro dzemakero, kugona kuita nguva yekutyaira, uye nzwisiso yakadzama yevatengi vako nenzvimbo - nekuti zvese zvinoitika kumwe kunhu.
Data Sayenzi uye Zvisarudzo - Simudza ongororo yechikwata chako nematanho-nhanho-nongedzo uye uchibatsira modelling kuvaka mamodheru pasina kukodha kana hunyanzvi hwe analytics. Wana nzwisiso uye mhinduro dziri nani nekushandisa dhata yenzira dzakaomarara dzekuongorora, kubva pakuongorora kwemanzwiro pane isina kugadziriswa data kuvaka zvimiro zvakaomarara zveR-zvine hunyanzvi hwekukodha. Shingairira iyo ungwaru rukoko neepamberi analytics, senge muchina kudzidza, kuti upe kumberi-kunotarisisa maonero
Automating Migumisiro - Gonesa vamwe kuti vagadzirise chero ongororo uye voita sarudzo nema analytic apps. Goverana mune akasiyana mafomati senge kunyora kumashure kune dhatabhesi kana bot kana leveraging maspredishiti kana iri nyore-yekudya mushumo. Vaka kamwe uye gadzikana zvachose. Nyatso kutaura mhinduro uye ugovane nevanobata-bata kuitira kuti vatore matanho, vaone zvinobuda, kana kutogadzira mashibhodhi akareruka muAlteryx. Simbisa kuburitswa kwevanhu uye gonesa kusingaperi kukwidziridzwa kwevanhu vane sarudzo dzakangwara kuti vakurumidze kukurumidza, zvirinani mhedzisiro.
Vashandisi vanotanga nenyaya yebhizinesi uye vanogona kukurumidza kugadzira analytics, data sainzi, uye kugadzirisa otomatiki mhedzisiro, pasina kuda chero hunyanzvi hunyanzvi Kumasangano, mhedzisiro hombe yeAPA inoonekwa munzvimbo ina dzakasiyana dzekudzoka pane kudyara:
Kuchinja Kwepamusoro-Mutsetse Kukura
Kuchinja Pazasi-Mutsara Kudzoka
Kuchinja Kwevashandi Kubudirira
Kusimudzira Vashandi Vako
Izvo zvinokonzeresa mhedzisiro yeAPA inokurumidza mhedzisiro yemabhizinesi, akazara otomatiki maitiro ebhizinesi, uye kugona kukurumidza kusimudzira uye kuita chinokanganisa.
Alteryx Inopindirana Demo Alteryx Yemahara 1-Mwedzi Kuyedza
Adobe Chiitiko Platform uye Alteryx
Iyo Alteryx Analytic Process Automation Platform uye Adobe Experience Platform inogonesa masangano kuti agadzirise kushambadzira analytics kuti vawane mhedzisiro inokurumidza inotungamirwa Iyo Alteryx APA Platform inopa yakapusa, yekukweva-uye-kudonhedza mhinduro iyo inorerutsa kuwanikwa kwedata uye kuongorora, uye inobvumidza vashambadziri kusanganisa data kubva kuAdobe Experience Cloud dhata sosi, kusanganisira Marketo Engage neAdobe Analytics, mumaminetsi kuti vaunze pfungwa dzakakomba dzekuongorora uye fungidziro analytics.
Tags: analobe analyticsadobe kuchinjanaadobe chiitiko chikuvaaialteryxAlteryx apaOngororo Maitiro EkushandisaAkaroashanduko yedhijitarimachine learningMarketo kuitapredictive analytics
Soundtrap: Gadzira Yako Guest-Inotungamirwa Podcast mugore
DroppTV: Uchishandisa AI Kuziva Uye Kutengesa Zvigadzirwa muVhidhiyo